Nyaya yaTux, iyo inonyanya kuzivikanwa mascot yesoftware yemahara | Linux Vakapindwa muropa
Kutora mukana wekuti mumwe wangu Pablinux asingamiriri akamutswa iwo mubvunzo nezvehunhu hwechokwadi hweiyo logo yeFirefox, Svondo iyoyo izuva rakanakira kuverenga kwakareruka uye, kuti komputa yangu huru iri muhunyanzvi hwebasa nezvose zvandinoda kupedzisa nhevedzano paJekyll Ino inguva yakanaka yekuita pfupiso yenhoroondo yemascot ane mukurumbira munyika yepachena software uye yakavhurwa sosi.
1 Nhoroondo yaTux
Mukutevedzana, Tux anga asiri iye wekutanga mascot wepasoft software yepasirese. Zvisinei, sezvo iri inonyanya kufarirwa, rega nditange nepenguin.
LPfungwa yekushandisa iyi mhuka semascot yeLinux kernel yaive, zvisingaite, naLinus Torvalds. Nekufamba kwenguva akapa tsananguro nhatu dzakasiyana. Iyo inonyanya kufarirwa account iyo:
Ndakagara ndichida mapenguin, uye pandakanga ndiri muCanberra makore mashoma apfuura takaenda kunzvimbo yemunharaunda. Ikoko vaive neine penguin inotyisa iyo yakandiruma uye ikandipa chirwere chinozivikanwa chinonzi "penguinitis". "Penguinitis" inoita kuti ugare husiku uchingofunga nezve mapenguin uye nekunzwa rudo rukuru kwavari. Saka apo Linux yaida chipfuwo, chinhu chekutanga chakauya mupfungwa chaive ichi chifananidzo cheiyo hombe penguin, uye zvimwe zvese nhoroondo.
Akazorondedzera zvakaitika chaizvo:
Hongu, ndakarumwa nepenguin, asi muchokwadi, yakanga isina kutyisa zvakanyanya. Yakanga iri 15-inch kana so pygmy penguin, uye yaive yekunyara kuruma ("Uyu munwe uri pamberi pangu hove diki here, kana chii?"). Zvakadaro, ini ndinonyatsoda mapenguin.
Pakupedzisira, aipedzisira abvuma kuti aingoda mapenguin. Uye iye aisada anofinha tech kambani marogo.
Dealt inojekesa kuti kwete chero penguin yaizoita, ndosaka akakurudzira vagadziri kuti tarisa pakugadzira iwo mufananidzo weakanaka uye anofara cuddly penguin. Akatosvika pakutsanangura kuti sei penguin yaifara, ichipa sarudzo mbiri; chero anga achangobva kuita bonde kana anga azere neshiri.
Nditende, ndiri penguin nyanzvi, idzo ndidzo chete sarudzo mbiri.
Zvisinei, akataura kuti, Nepo vamwe vagadziri vanganzwira tsitsi nepfungwa yehoridhe penguin, yakanakisa yaive ese-ese mazera sarudzo yeheringini yakakanyiwa penguin.
Nekudaro, akakumbira kufungidzirwa semhuka inorema zvishoma, akagara pasi mushure mekuzvizadza nechikafu chaanofarira uye kupedzisa kubhaiza. Akagara achinyemwerera zvine mutsindo sezvo nyika iri nzvimbo yakanaka kuvepo kana uchangobva kudya mapaundi mashoma ehove mbishi uye iwe unogona kunzwa imwe burp ichiuya.
Zvichida achifunga kuti kutengeswa kwemadhori iyi ingave nzira yakanaka yekutsigira chirongwa ichi, akaudza vanogadzira kuti vazive kuti aive neyakagadzirwa dhizaini - vana vadiki vaisvetuka vachidanidzira vachikumbira vanaamai vavo kuti vamutengere icho.
Dhizaini yatinoziva nezvayo yakagadzirwa uchishandisa Gimp naLarry Ewing uyo anobvumidza kushandiswa kwayo chero bedzi mugadziri uye chirongwa chakashandiswa zvataurwa.
Kutsanangura zita iro vagadziri vakaita mukwikwidzi apo Linus aive akabatikana nechimwe chinhu. Iyo nyaya inoenda kuti aigona kunzi Homer, kune vamwe akayeuchidza vamwe nezvaHomer Simpson muchimiro cheshiri iyo panzvimbo yemadonati yakarasika nekuda kwehering.
Pakupedzisira imwe yakaumbwa netsamba dzemazwi Torvald's Unix (Iyo Unix yeTorvalds.
Sechokwadi chinoda kuziva, zvinofanirwa kutaurwa izvozvo Tux akatora zororo muna 2009 yeLinux kernel vhezheni 2.6.29. Nzvimbo yake yakatorwa naTuz, dhiabhori weTasmania akapfeka chifukidzo chepenguin.
Tuz yakatanga kugadzirwa semascot yemusangano weLinux Australia wakaitwa gore rimwe chetero. Iko shanduko yaive yekuparadzira chikumbiro chekutsakatika kweiyi mhando inokurudzirwa nemhando inopararira yegomarara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Nyaya yaTux, mascot ane mukurumbira mune mahara software